'माओवादी प्रचण्डको हो कि नेपाली सर्वहारा वर्गको हो ?' | Namastepost.com
‘माओवादी प्रचण्डको हो कि नेपाली सर्वहारा वर्गको हो ?’
देश October 7, 2017 दिलनिशानी मगर ,
एक प्रतिशत पनि कम्युनिस्ट आचरण नभएको एमालेसँग माओवादी केन्द्र विलय गराउने कुराले एउटा प्रश्न जन्माउँछ, त्यो हो ‘माओवादी केन्द्र प्रचण्डको हो कि नेपाली सर्वहारा वर्गको हो ?’ त्यो बारेमा बहस नै गर्न छाडेर कतिपय मित्रहरूले जसरी पनि नेतृत्वको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने तर्क पेश गरेका छन् । कार्यान्वयन न पार्टी सुधार्ने, नयाँ बनाउने भन्ने विचारको हुन्छ, पार्टी नै एमालेकरण गर्ने भन्नेमा हुँदैन ।
अस्तिसम्म एकअर्काप्रति हिलो छ्याप्न तयार पार्टी पत्रकारहरूले वाम एकता प्रयासको सिलसिला निकै रोचकका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । चिया गफमा गरिएका कुराकानीहरू पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण हो भने एमाले कांग्रेसका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू अहिले पनि राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा कुरा गरिरहेका देखिन्छन् । एमाले नेता का त संविधानसभा र संघियता विरोधी अभिव्यक्तिहरू न माक्सवादी थिए न समाजवाद उन्मुख नै ।
कमिटीमा कुनै किसिमको छलफल नै नचलाएर एमालेसँग पार्टी एकताको लागि सहमति जनाउनु माओवादी केन्द्रको लागि एउटा परिक्षणको बिषय त हो नै । तर ‘पर्ख र हेर’ भन्ने जस्तो पुरानो राजनैतिक मान्यताको आधारमा अहिलेको नेपाली सामाज अथवा मतदाताहरू अडिन सक्दैनन् । त्यसैले एमालेसँगको एकताले सफलता हासिल गर्न सकेन भने माओवादी केन्द्रको भविष्य अत्यन्तै जोखिम बिन्दुमा पुग्नेछ ।
प्रचण्डको वामदेव गौतम र माधव नेपालको दोस्ती मात्रै यो उपलब्धिको कडी होइन । जसरी मिडियाहरूमा अनेकौँ किस्सा आइरहेको छ, त्यो अत्यन्तै उत्साहित अवसरवादीहरूको डकार मात्रै हो । व्यक्तिको के कुरा? प्रश्न राजनीतिको हो । राजनैतिक रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्रको उत्पत्ति , कार्यदिशा एउटै हो ? राजनैतिक रुपमा एमाले र माओवादीको धरातालीय दृष्टिकोण खासगरी मधेसी, आदिवासीहरू र जनजातिलाई बुझ्ने सन्दर्भमा दृष्टिकोण समान हो ?